बिहान उठेर खाली पेटमा पानी पिउनुको ५ फाइदाहरु - IAUA
ramkrishna December 1, 2017	बिहान उठेर खाली पेटमा पानी पिउनुको ५ फाइदाहरु
मानिसको शरीरलाई स्वस्थ र फिट हुनको लागि पानीको निकै ने ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । मानव शरीरमा पानीको मात्रा ५०–६० प्रतिशत हुन्छ । पानीले शरीरका अंगहरुको पनि रक्षा गर्छ । पानीले नै मानव शरीरको कोशिकाहरुमा पोषक तत्व पूराउने काम गर्छ । साथै पानीबाट मानव शरीरमा चाहिने अक्सीजनको पनि सञ्चार गर्छ
यी बाहेक पानीले मानव शरीरको तापमानलाई पनि नियन्त्रण गर्छ । तर के तपाईंलाई थाहा छ बिहान उठेर खाली पेटमा पानी पिउनुको कति फाइदा छन् ? जब तपाईं बिहान उठ्नुहुन्छ तब तपाईंको शरीरलाई पानीको निकै नै जरुरत भएको हुन्छ । त्यसैले बिहान उठ्ने बित्तिकै २–३ गिलास पानी पिउनुपर्छ । हरौं बिहान खाली पेटमा पानी पिउँदाका ५ फाइदाहरु के–के छन् त ।
बिहान उठेर पानी पिउनाले शरीरमा नयाँ कोशिकाहरुको निर्माण हुन्छ । यो बाहेक खाली पेटमा पानी पिउँदा माम्सपेसीहरु पनि बलियो हुन्छन् । बिहान उठेर पानी पिउँदा गाला, महिनावरी, आँखा, पिशाब र किडनी सम्बन्धी थुप्रै समस्याहरुबाट मुक्ति मिल्नेछ ।newssewa
Previous Previous post: सार्वजनिक शौचालयको ढोकामा तल्लोपट्टि किन राखिन्छ एकहातजति खुल्ला ?
Next Next post: छुर्पी उत्पादन बढ्यो